Su'aalah isweydiintoodo soo noqnoqoto - Gobstore
10 alaab ugu jaben manta
Alaabtii ugu dambeeysey
All Categories Dharka Raga Dharka DUMARK
Tran ding Styles
HomeSu’aalah isweydiintoodo soo noqnoqoto
Su’aalah isweydiintoodo soo noqnoqoto
Sidee baan u sameysan karaa akoonka Gobstore.com (Gobstore.com)?
Ma ka sameeysan karaa akoonno badan gobstore?
Haa waad sameeysan kartaa. Laakiin waa in aad isticmaashaa cinwaaanno kala duwan iyo mid walba lambar taleefoon oo gaar ah.
Akoon la’aan wax ma ka dalban karaa gobstore?
Arrintaasi immika ma jirto. Waxaad u baahandoontaa in aad akoon sameeysato si aad alaab u dalbato.
Sidee baan u bedelaa lambarkayga sirta ah (my password)?
Dul gee mooskaaga isdiiwaan gali (log in/register) , ka dib isdiinwaan gali (log in). ka dibna guji ilow lambarkaaga sirta ah (forgot your password). Daaqada ku xigta, gal cinwaanka emailkaaga ama lambarka moobeelkaaga iyo koodhka xaqiijinta (verication code) , ka dibna guji botonka ‘Reset Password’ . waxaannu kuu soo diridoonnaa farriin email oo ah bedel lambarkaaga sirta ah ( a link to reset your password).
Mens Fashion 2019 Printed Mens round neck Hoodies Sweatshirts $19.99 $29.99
Custom Fashion Anti-Shrink Slim Fit Men Clothing Pullover Hoodie With String $19.99 $29.99
Top fashion trendy tracksuits custom pink tracksuit men french terry sweatsuit $19.99 $29.99
Osaka Entry Tee Superdry 12 $13.99 $16.99
SS Crew California Sub River Island $11.99 $14.99
Lawrance Polo Tee Jack & Jones $9.99 $14.99
Is diwaan gali
...oo hel $20 dhibcood iibkaga ugu horeya
hadii ubahen tahey cawin ? Call us 24/7! 2090
Hargeisa, kasoo horjeedka kaaraha udhow somcable ,
Borama kasoo horjeedka sagaljet boorama
© Gobstore - All Rights Reserved